प्लेटफार्म स्वीप पुर्‍याउने पिशाच श्रृंखला बेजिया
प्लेटफार्ममा स्वीप गर्ने पिशाचको श्रृंखला
सुसाना Godoy | | समाचार
यदि तपाइँ भावुक हुनुहुन्छ वा यस बारेमा भावुक हुनुहुन्छ पिशाच श्रृंखला, त्यसोभए तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ। किनभने यो अझै एक उत्तम विधा हो जुन प्लेटफार्ममा पनि उपस्थित छन्। सत्य यो हो कि केहि शीर्षकहरू सबै भन्दा राम्ररी परिचित छन् र अरूले तपाईलाई चकित पार्नेछन्।
तर ती सबै एक बनाएको छ साहसिक ब्रह्माण्ड, रोमान्स र धेरै रक्तपातपूर्ण फ्याs्गहरूको, किन यो स्वीकार्नु हुँदैन। यी सबैले हामीलाई मोहित गर्दछन् यसैले यदि तपाईं उनीहरूका सबै कथाहरूको आनन्द लिन चाहनुहुन्छ भने, त्यसोभए तपाईं हिचकिचाउनु हुँदैन। भ्याम्पायर श्रृंखला मार्च गर्दै जुन तपाईंलाई उदासीन छोड्दैन!
1 भेम्पायर श्रृंखला जसले आफ्नो छाप छोडे: भ्याम्पायर इतिहास
3 साँचो रगत
4 भ्यान हेलसिङ्
5 हामी छायामा के गर्छौं
भेम्पायर श्रृंखला जसले आफ्नो छाप छोडे: भ्याम्पायर इतिहास
कुनै श doubt्का बिना, त्यो श्रृंखला चलिरहन्छ कि seतुहरू पछि, हामी अझ बढी खोजिरहेका छौं। यो सत्य हो कि यो तीन बर्ष भन्दा पहिले समाप्त भएको थियो, तर आज त्यहाँ अझै धेरै प्लेटफर्महरू थिए जुन यो उपलब्ध थिए। ती मध्ये एक अमेजन प्राइम थियो, यद्यपि अहिले तपाईं HBO मा देख्न सक्नुहुन्छ। हो, त्यहाँ तिनीहरूका सबै asonsतुहरू छन् र तपाईं इलेना, डमोन र स्टीफन साल्भाटोरेसँग प्रेममा पर्नुहुनेछ। धेरै रहस्यहरू, जादुई र सँधै, सबै भन्दा रमाईलो र सफल हुनु अघिको त्यो स्पर्शको साथ एक फरक पात्रहरूको कथा।
Vampiric इतिहास को महान सफलता पछि तिनीहरू पनि आइपुग्छन् 'मूल'। जे होस् सत्य यो छ कि यो फिलिम गरिएको थियो जब अघिल्लो एक हावामा थियो। हुन सक्छ, यो एक 'स्पिन बन्द' छ। किनकि इतिहासमा त्यस्तो देखिन्छ जुन अतुलनीय शक्ति भन्दा अधिकको वास्तविक परिवार हो। ठीक छ, हामी पनि एक श्रद्धाञ्जली तिर्नु पर्छ एक श्रृंखला को रूप मा कि पाँच सत्रहरु छ। ती सबै पछि, 'लीगेसीज' पनि देखा पर्‍यो, जुन भम्पायर ब्रह्माण्डलाई अलविदा भन्न गाह्रो भयो।
उनले हामीलाई पिशाच र मानिस बिचको कहानी पनि सुनाए। यसको पहिलो प्रसारण २०० 2008 मा सम्पन्न भयो जुन २०१ 2014 मा अन्त्य भयो र सबै शैलीका प्रेमीहरूको लागि, एक अत्यन्त छोटो कथा। यसलाई यसको प्रकारको सब भन्दा राम्रो श्रृंखला भनिएको छ र क्लासिकको अर्को भए पनि, यो तपाईंको संग्रहमा पनि उपस्थित हुनुपर्दछ। हो, HBO तपाईं लाई यो देखाउन को आरोप मा एक हो। निस्सन्देह, हत्या र बदलाको तिर्खाको बाबजुद हामीसँग पनि प्रेम कथा छ घातक र पिशाच.
यो अघिल्लो भन्दा धेरै नयाँ श्रृंखला हो, जहाँ नायक हो भेनेसा हेलसिनg धेरै वर्ष कोमामा बिताएपछि, उनी उठ्छन् तर महसुस गर्छन् कि उनी यस्तो संसारमा छन् जहाँ पिशाचहरू सबै चीजको मालिक र प्रभु हुन चाहन्छन्। तसर्थ, उसले अरू सबै भन्दा माथि बाँच्न र पिशाचलाई पराजित गर्न कोशिस गर्नेछ। यो गर्न, उनी एक्ली छैनन् तर उनका विश्वासी साथीहरू साथ छन्। तपाईंले यो देख्नु भएको छैन?
हामी छायामा के गर्छौं
किनभने सबै भ्याम्पायर श्रृंखलाहरू यत्तिको डरावना हुने छैन, तर कहिलेकाँही हामी एउटा सानो प्रकार पनि पाउँछौं। यो यस श्रृंखलाको मामला हो जुनसँग हास्य यसको मुख्य टॉनिकको रूपमा। यसको मतलब यो होइन कि हामी आफैंलाई शीर्षकको विस्तृत श्रृंखलाका साथ फेला पार्दछौं। यस समयमा योसँग केवल दुई सत्रहरू छन्, तर त्यहाँ पहिले नै तेस्रोको बारेमा चर्चा छ। त्यसो भए तपाई कुनै समय मा समात्न सक्षम हुनुहुनेछ। के तपाई यसलाई खोज्न चाहानुहुन्छ?
यो सबैलाई थाहा छ। ड्रेकुला अद्वितीय पिशाच हो र यस्तै धेरै फिल्महरूका साथै श्रृंखलाको स्टार पनि भइसकेको छ। यस अवस्थामा, यो अर्को अधिक अपडेट गरिएको संस्करणको साथ आउँदछ Netflix। यो एक घण्टा भन्दा बढी को बारेमा तीन एपिसोड हो र जुन विभिन्न भाग हुन्छ। मानौं हामी अनन्त भ्याम्पायरको जीवनमा तीन फरक क्षणहरू बारेमा कुरा गर्दैछौं। यद्यपि यस्तो लाग्दछ कि हामीलाई उसको बारेमा सबै कुरा थाहा छ, त्यसले हामीलाई यस केसमा पनि चकित पार्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » समाचार » प्लेटफार्ममा स्वीप गर्ने पिशाचको श्रृंखला
HIIT दिनचर्या घरमा: कुनै बहाना छैन!
पाना र तकियाहरू धुनेका लागि सुझावहरू